Wasiirka Qorsheynta oo ka qeybgalay shir Jaaliyadda Soomaaliyeed ay ku yeesheen Sweden”SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Wasiirka Qorsheynta oo ka qeybgalay shir Jaaliyadda Soomaaliyeed ay ku yeesheen Sweden”SAWIRRO”
Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ceynta ayaa Sweden uga qeybgalay shirweyne looga doodayo arimaha xagjirnimada iyo sidii looga hortagi lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda laga khalday.
Shir sanadeedka Ururuka isbaheysiga Umadda Soomaaliyeed ee Sweden oo ay ku mideysan yihiin Jaalliyada kala duwan ayaa si rasmi uga furmay magaalada Stockholm caasimada dalka Sweden iyada oo shir saneedkan ay ku lamaaneed xaflada dabaaldega sanad guurada 20-aad ee markii ururkan la aas-aasay.
Maalinta koowaad ee shirweynaha ayaa diirada lagu saaray arimaha la xiriira xagjirnimada gaar ahaan fikradaha khaldan ee lagu marin habaabiyey bulshada ee keentay in qaar ka mid ah dhalinyaradeena ay u safraan dagaalada ka socdo qeybo ka mid ah dunida.
Furitaanka shirka lagu casuumay wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ah ee Mudane C/raxmaan Ceynta, madax ka socotay dowlada Sweden sida maamulka magaalada Stockholm, Culumaaäudiin ku xeel dheer diinta islaamka iyo khubaro cilminafsiga yaqaan.
Gudoomiyaha ururka isbaheysiga Umadda Soomaaliyeed ee Sweden Mudane C/nuur Ciise oo furitaanka shirka ka hadlay ayaa ku tilmaamay maalin weyn oo farxadeed mar hadii loo dabaaldegaayo sanadguurada 20-aad ee ururka, waxa uuna amaan iyo mahadcelin u diray aas-aasayaashii iyo dadkii illaa waqtigaas ku soo dadaalayey jiritaanka ururkan maadaama aysan Sweden ka jirin safaarad matasha umadda Soomaaliyeed .
Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah Mudane C/raxmaan Ceynta oo khudbad dheer kaga hadlay furitaanka shirka ayaa ugu horeyn ku amaanay isla markaana bogaadiyey Jaaliyada Soomaaliyeed ee Sweden oo sanadkan u dabaaldegaysa sanadguurada 20-aad, ee markii la aas-aasay, waxa uuna dhinaca kale si qoto dheer kaga hadlay doorka qurba joogta Soomaaliyeed ee ku leeyihiin arimaha horumarka iyo dib u dhiska .
Mudane C/raxmaan Ceynta oo ka hadlayey arimaha Xagjirmada ayaa tibaaxay in uu daraasado dhowr ah ka sameeyey sababaha keeni karo in qof nool uu ku firo heer uu naftiisa qarxiyo taas oo uu ku macneeyey laba arimood oo tan ugu weyn ay tahay faqriga iyo tan kale oo ah qofka nolosha ku guuldareysta.
Sh.C/raxmaan Sh. Muxyadiin Celi oo ku hadlayey doorka culmida ayaa ku dheeraaday sida qaldan ee loo adeegsaday macnaha jihaad iyada sida loo marin habaabiyey dhalinyarada, waxa uuna dhibaatada eedeeda dusha ka saaray Culumimada Soomaaliyeed iyo waalidka oo gudan waayey waajibaadkii saarnaa.
Sidoo kale waxaa munaasabada khudbad ka jeediyey Sheekh C/casiis Sharaf oo isna ku dheeraaday sida looga fogaan karo falalkan guracan ayna yihiin kuwo ka dambeeyo dad fikir qaldan heysta, isaga oo ku baaqay in si wada jir ah la isku kaashado.
ka qeybgalayaasha shirweynahan ayaa sidoo kale habeenkii xalay ahaa isugu yimid xaflada casho sharaf ah taas oo lagu soo bandhigay filim ka hadlayey waxqabadka iyo aas-aaskii Jaaliyada Soomaaliyeed oo uu fikirkeeda lahaa Allaha u naxariistee caalamkii weynaa Sheekh Cumar Faaruuq.
Shirweynahan ayaa sidoo kale waxaa lagu casuumay mas’uuliyiin kale oo Dowlada Soomaaliya ka tirsan sida Xildhibaan Saciid Xeyd, iyo Agaasimaha guud ee Wasaarada Warfaafinta Mudane C/risaaq Cali Yuusuf Bahlaawi.
Hotelka Shirkweynahan uu ka socdo ayaa waxaa dushiisa ka babanayey calanka Jamhuuriyada Soomaaliya.
Wasiirka Amniga gudaha iyo mas’uuliyiin kale oo booqday Hotel Maka Al-mukarama”SAWIRRO”
Ra’iisul wasaare Cumar oo ka qeybgalay Salaadda Janaazada Allaha u naxariistee Danjire Yuusuf Bari Bari”SAWIRRO’